Vika Trollen-Idyllic cottage ebomvu ngaselwandle - I-Airbnb
Vika Trollen-Idyllic cottage ebomvu ngaselwandle
Xa iyi-242 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Indlu epholileyo ebekwe kanye kumda wamanzi enethafa elikhulu elijonge emazantsi. Ebudeni beenyanga zasehlotyeni, kuqukwa isikhephe sokubhexa kunye nephenyane kwi-jetty, kunye ne-charcoal grill kunye nefenitshala yangaphandle. Kukho i-WiFi ekhawulezayo kwi-cottage efikelela kuyo yonke indlela ezantsi kwi-pier.
I-cottage inamagumbi amabini okulala apholileyo kunye negumbi eliphezulu apho unokudibana khona ngokuhlwa. Ikhitshi elincinci lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto ezininzi onokuthi uzifune ngexesha lakho leholide, ezifana ne-micro dishwasher kunye nefriji enkulu kunye nefriji.
Ukuba kufutshane namanzi. Abamelwane bakhona kodwa indawo yokuhlala isebucala. Akukho mntu wabelana ngolwandle kunye nejethi kunye neendwendwe.
I-wifi ekhawulezayo – i-242 Mbps
Ibekwe kwi-peninsula entle kunxweme olusemantla e-Östra Ingsjön. Iipropati ezibumelwane ziyafumaneka kodwa zisavalelwe. Iindlela ezilungileyo zokuhamba emahlathini apholileyo. Indlela yaselizweni enamajikojiko iya emazantsi echibi ithi itsale abakhweli bezithuthuthu ngezinye iintsuku. Ijethi yakho yabucala.
Ndihlala 200m ukusuka kwi cottage so iyafumaneka xa ifuneka kodwa andiphazamisi iindwendwe ngokungeyomfuneko.